Malunga Nathi-Yantai Dongyuan Plastic Products Co., Ltd.
inkampani yethu inokubonelela ngeentambo ezi-3/4 zePP danline Intambo, intambo ye-Monofilament, intambo ye-Multifilament, i-polyester / i-Nayiloni, intambo ephothiweyo, i-baler twine.Kwakhona ukubonelela nge-polyethylene (PE) intambo yentambo, ipokotho ye-PP yezinto eziphathekayo, i-chemical fertilizer hoisting net, i-network yokugcina i-cargo, i-aquaculture yemoto, umnatha wokhuseleko kunye neenkcukacha ezikhethekileyo zomnatha owenziwe ngesandla, iintambo zisetyenziswa kakhulu ekulobeni, kwi-aquaculture, ezolimo, ukupakisha, ukulima kunye nemidlalo.Iinetha zisetyenziswa ikakhulu kugcino lwamashishini okuvelisa izichumiso, amashishini okutya okuziinkozo kunye neoyile .
iimveliso zethu zinokuhlangabezana nemigangatho yoshishino lwasekhaya kunye nemigangatho yezizwe ngezizwe ye-ISO, kwaye inokuqinisekiswa ngokweemfuno zabathengi ezifana ne-SGS, CE, GS...Imveliso yethu ithunyelwa kumazwe akumzantsi-mpuma we-Asia anjengeSingapore, iMalaysia, kunye nePhilippines, kwaye ngokunjalo. ithunyelwa kumazwe akuMbindi mpuma, eYurophu naseMelika.Bamkele ngokunyanisekileyo abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba bandwendwele umzi-mveliso wethu kwaye sinethemba lokusebenzisana nawe.
Ngubani Osithembileyo ?
Intambo yePP inokubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nexabiso elikhuphisanayo kumthengi wethu, iimveliso zethu ezithunyelwa kumazwe asezantsi-mpuma aseAsia anjengeSingapore, iMalaysia, kunye nePhilippines, kwaye zithunyelwa ngaphandle kuMbindi Mpuma, eYurophu, naseMelika.Kwaye iimveliso zethu zinokudibana ukwenza iimfuno zomthengi ezifana SGS, CE, GS
Zonke ezi satifikethi zithetha nje ukuba sihlala siPhucula…
singakwenzela ntoni ?
Siyilawula ngokungqongqo yonke inkqubo ukusuka kwimathiriyeli ekrwada yokungena kumzi-mveliso ukuya kwiimveliso ze-ex-factory.Inkampani yethu inenkqubo yokuqinisekisa umgangatho ogqibeleleyo kunye nenkqubo emva kokuthengisa.